जब एमआरआई मेसिनभित्र बिरामी थुनिए... - Health Aawaj -ahealth news portal in Nepal
गृहपृष्ठ ∕ समाचार ∕ जब एमआरआई मेसिनभित्र बिरामी थुनिए…
जब एमआरआई मेसिनभित्र बिरामी थुनिए…
हेल्थ आवाज बुधबार, २०७६ असोज ८ गते, १६:४३ मा प्रकाशित
एजेन्सी । भारतमा एमआरआई गराउन गएका एक विरामी एमआरआई मेसिनभित्रै थुनिएका छन् । चिकित्सकको लापरबाहीले ६१ वर्षीय वृद्ध मेसिनभित्रै थुनिएका हुन । हरियाणाको एमआरआई–स्क्यान सेन्टरमा सो दुर्लभ घटना भएको हो ।
यही २२ सेप्टेम्बरको साँझ ६१ वर्षीय राम मेहर परीक्षणका क्रममा अस्पताल पुगेका थिए । प्राविधिकले स्क्यानिङका लागि उनलाई एमआरआई मेसिनमा राखे । त्यतिबेलासम्म उनको अवस्था सबै ठीकै थियो । मेसिनभित्र बिरामीलाई राखेका प्राविधिक लामो समयसम्म नदेखिएपछि भने बिरामीको छटपटी बढ्यो । केही बेरपछि ती बृद्धले मेसिनभित्र निसास्सिएर श्वास फेर्न गा¥हो भएको अनुभूति गर्न थाले ।
उनी मेसिनबाट बाहिर आउन खोजे, तर पेटीले बाँधिएकोले उम्किन सकेनन् । बृद्धले धैर्यता गुमाएनन । धेरै मिनेट लामो संर्घषपछि उनले बेल्ट भाँचिदिए र मेसिनबाट बाहिर आउन सफल भए । वास्तवमा प्राविधिकले वृद्धलाई मेसिनभित्र राखेको बिर्सिएका रहेछन् ।
पीडितले स्क्यान केन्द्रका कर्मचारीमाथि गम्भीर आरोप लगाएका छन् । मेसिनको बेल्ट भाँच्न केही सेकेन्ड ढिलो भएको भए आफ्नो मृत्यु हुन सक्ने उनले उजुरीमा उल्लेख गरेका छन् ।
४ निष्क्रिय र विलासी जीवनशैलीले उकालो लाग्दै मुटु बिरामीको संख्या : डा. विष्ट
५ गेटालाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान बनाउँछु : प्रधानमन्त्री देउवा
७ पुरुषमा पनि हुनसक्छ स्तन क्यान्सर : डा. बानिरा